स्त्री विज्ञान र उपचार सुझावहरूको प्रश्नहरू
X-CH घुँडा बनाईएको छ ... स्क्रीनिंगमा, कुनै पनि कुराले खराब कुरा भनेन :) हो, सबै ठीकठाक छैन।
म अज्ञानतामा ढिलाइमा छु र कफी निर्माताहरूले देखेका थिएनन्,2चौकीहरू, भिखारीमा डराए। अब म यसमा सबै समस्याहरूलाई श्रेय दिन्छु, र केहि गर्न ढिलो भयो।
हो, तपाईंले अल्ट्रासाउन्डको लागि कुर्नु पर्छ। 8 हप्ताका लागि प्रेमिका लीभियनको लागि ओर्भियन सकियो (जस्तै, म अझै दिमाग लागू हुँदैन), सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत। अपरेशन पछि, तिनीहरूले एक अल्ट्रासाउन्ड बनाएका थिए र गर्भावस्था बनाए, गर्भपाती गर्न बाध्य भए, र अल्ट्रासाउन्डको लागि पर्खिएकी थिइन। नतिजा स्वरूप, बच्चा पहिले नै2बर्षसम्म स्वस्थ हुँदै गएको छ, मुख्य कुरा यो हो कि यो एक मेरुदण्ड एक्स-रे र श्रोणि होईन।
चिन्ता नलिनुहोस्, म प्रभावित हुने छैन! उज्जीले बढी हानि पुर्याउँछ! मसँग एक डाक्टरको श्रीमान् छ, र उनले भर्खरै सबै डाक्टरहरूसँग काम र "उनीहरूलाई यो शीर्षकमा" नाक नाक नाक "को साथ काम गर्ने।
एक्स रे बनाएको डाक्टर पनि धेरै लाज मानिन्छ कि उनलाई यो थाहा थिएन। र सबैजना उहाँमाथि फ्याँकिए किनभने उसले फोक्सोको इन्फ्लिमेनको शंकाको साथ गर्भवती पठायो।
म त्यो ऊन गएँ। मलाई थाहा थिएन अझै गर्भवती के छ? परिचय2हप्ता थियो। TTT, हामीसँग सबै ठीक छ। छोरी स्वस्थ छ
<< p> यस पृष्ठमा यस पृष्ठमा सब भन्दा लोकप्रिय पोष्टहरू र टिप्पणीहरू समावेश गर्दछ "ढिलाइ हुनु अघि प्रारम्भिक समयमा" एक्स-रेको प्रारम्भिक यसले तपाईंलाई छिट्टै प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईं छलफलमा पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ।
ढिलाइ, शाब्दिक केही दिनहरू। चक्की228, 300, .2। थोरै तत्व तैरन्छ। एक परीक्षण बनायो - सकारात्मक। 1 th नम्बर अल्ट्रासाउन्डमा गए, उनीहरूले भने कि त्यहाँ एक धेरै सानो फल अण्डा0छ। हेर्नुहोस्। मैले प्रमाणपत्र आयोजना गरेको प्रमाणपत्र राख्दछु। म एक हप्ता,226 संख्यामा उठ्न भेला भएँ। आज,2the औं बिहान उसले एक स्मीयरी याद गर्यो र एम्बुलेन्स कल गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसैले प्रगति गर्न को लागी। ब्रिगेड शब्दका साथ राम्रो थियो र ... /
<< p> गर्भावस्था हुनु अघि beght at मा at मा, एक महिला सामान्यतया यसमा नयाँ बढ्दो जीवनको उपस्थिति बारे सचेत छ। यस चरणमा, बच्चाले प्राय: यसलाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्दछ - प्राय: weeks हप्ताको सबै चिन्हहरू र लक्षणहरू महिलाहरू पर्याप्त छन्। उनी गर्भवती छिन्, भविष्यले आफुले आफुलाई निगरानी गर्नु पर्छ, सबै हानिकारक र
केटी सँगै मसँग आए, अफिसमा गए। छोटकरीमा, यो भयो कि यो एक्स-रे द्वारा गरिएको थियो र केहि परिचय थियो। उनी पहिले भइन्, तर ढिलाइ हुनु अघि थाहा भएन। अब उनीसँग 3-4-। हप्ता छ। मेरो g कडाईका साथ गर्भपातपूर्वक व्यवहार गरिएको सल्लाह दियो। प्रकार, सबै कुरा पहिले नै केहि पनि राम्रो छैन। र उनी यति दुखीत भएकी थिइन, जन्म दिन चाहन्छ। के कोहीसँग सुरुमा एक राम्रो परिणाम हो?
माथिको स्थितिको पुष्टिकरणमा विशेषज्ञहरूले पशुयुक्त प्रयोगहरू र नागासाकी शहरहरूको बमवर्षकका नतिजाहरूको नतिजा ल्याए र 20% दिए, विभिन्न प्रकारका उल्लंघन विकासबाट बच्चाहरूलाई जन्म। प्राय: प्रायः स्नायु प्रणालीको दुर्गुणहरू चिह्न लगाए।
को प्रभावको प्रभावको सुविधाहरूको सुविधाहरू:
एक्स-रे गर्भावस्थाको पहिलो2महिनामा सबैभन्दा खतरनाक छ। 1 the औं हप्ताको डाटाको आधारमा, 1 oth औं हप्ता पछि, त्यहाँ उतिकाएको बच्चाबाट विलाप गर्न सक्षम हुँदैनन्, तर यसको मतलब यो होइन कि निर्दिष्ट समय पछि, आइमाई विवादास्पद हुन सक्छ।
<< p> सामान्यमा राधिआबुकोंड3मुख्य जोखिम समूहहरूको लागि वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। यी क्षणहरूको लागि जानकारी निम्न तालिकामा दिइन्छ।
एक्स-रे दाँत गर्भावस्थामा
गर्भावस्था मुख्यतया धेरै जोखिम हो। तसर्थ, जब दाँतको एक्स-रे नियुक्ति हुन्छ, पहिलो कुरा औसत भविष्यको आमाको बारेमा सोच्दछ - र यदि बच्चाले हानी गर्दैन?
यस्तो देखिदैन जस्तो देखिन्छ। 1 प्रक्रियाको लागि विकिरण लोड शाब्दिक सानो छ - लगभग 0.03 Msv। गर्भावस्था एक्स-रेको लागि पूर्ण सीमांकन होइन। तर कसरी आफैंलाई जोगाउने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ र कुन अवधि निदानको लागि सुरक्षित हुनेछ।
जब तपाईं दन्त एक्स-रे बिना गर्न सक्नुहुन्न
p> दाँतको उपचार "अन्धाले" कसैको लागि सिफारिस गरिएको छैन र विशेष गरी भविष्यका आमाहरू। एक्स-रेको लागि धन्यबाद, डाक्टरले दन्त दुखाई, स्थानीयकरण र अन्य महत्वपूर्ण नवंधनको कारण देख्दछ।
केटीहरू, मद्दत गर्नुहोस्, कृपया! हुनसक्छ कोही यस्तो थियो ?? काममा, योजना बनाइएको थियो, days दिन पछि मैले बुझें कि यो गर्भवती छ। के यसले फललाई असर गर्छ ??? वा सबै कुरा, अन्त हो ?? ... मेरो डाक्टरले भने कि अब अझै स्पष्ट छैन।